जीवनमा नियमित यी ३ सूत्र प्रयोग गर्नुस, जसले तपाईलाई लामो आयु दिन्छ ! - Medianp.com
सोमबार, १२, फागुन, २०७६
जीवनमा नियमित यी ३ सूत्र प्रयोग गर्नुस, जसले तपाईलाई लामो आयु दिन्छ !
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: , ०, ००८:१५0
काठमाडौँ । तपाई जतिसुकै स्वास्थ्य रहनुस् वा लामो समय बाच्ने प्रयास गर्नुस् तर एकदिन मर्नैपर्छ । त्यसर्थ फेरी मर्नु पर्छ भन्दैमा जे पायो त्यही खाने ,जे मन लाग्यो त्यही पनि गर्नु हुदैन् । यो संसारमा सबै मानिसहरुलाई लामो समयसम्म बाँचु भन्ने चाहना हुन्छ । तर कतिपय मानिसहरुको सानो उमेरमा गम्भिर रोग लागी अकालमै मृत्यु हुन्छ ।
त्यसैले यदि तपाई पनि लामो समयसम्म बाँच्न चाहनुहुन्छ भने यी ३ सूत्र अपनाउनुस् । अमेरिकामा गरिएको अनुसन्धानमा यी ३ सूत्र आफ्नो जीवनशैलीमा नियमित अपनाउने मानिस लामो समयसम्म बाँचेको पत्ता लागेको छ । हेर्नुस् के के हुन् ?
१. नियमित ब्यायाम गर्नुपर्छ । किनभने नियमित काम वा ब्यायाम गर्नाले रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाई शारिरिक र मानसिक दुवै रुपमा स्वास्थ्य राख्दछ । त्यसका लागी दैनिक १५ मिनेट सवारी साधन नचढी हिड्ने बानी गर्नुपर्छ ।
२. नियमित स्वास्थ्य र सन्तुलित भोजन खानुपर्छ । जसमा प्रशस्त मात्रामा फलफूल , हरियो सागसब्जी ,गेडागुडी ,दूध , दही र माछा खानुपर्छ ।
३. सामाजिक जीवनशैलीले पनि लामो समयसम्म बाँच्न मदत गर्छ । बिचार गर्नुस् ,जसको सबैभन्दा धेरै साथी छन् , उ निकै खुसी हुन्छ । त्यसैले मानसिक रुपमा एकदमै स्वास्थ्य भई लामो समयसम्म बाँच्छ ।
हाच्छ्यु रोक्नु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक : यस्ता छन् ५ बेफाइदाहरु
अक्षय कुमारको फिल्म ‘गुड न्यूज’को नयाँ पोस्टर सार्वजनिक